Koofiyad Baraf V09
Dhismaha qaab-dhismeedka, miisaan fudud.
Hawo-mareennada casriga ah
Lambarka Moodalka V09
Teknolojiyada koofiyad ku jirta
Shahaadada CE EN0177
Muuqaalka khafiif ah, suufka suufka laga saari karo, hawo-qaboojiyeyaasha
Koofiyaddan barafku waxay ku shubaysaa qaabka nadiifka ah, ee ka faa'iideysiga kabaha yaryar - laakiin waxay miiska keenaysaa hal-abuurnimo farsamo. Koofiyadda qaab-dhismeedkeeda ayaa ku sii haysa iftiin, halka suunka dhegta la saari karo iyo khadadka raaxada ee is waafajiya ay kuu oggolaanayso inaad socodsiiso qaabkaaga si kasta oo aad jeceshahay.
Qaab xarrago leh iyo waxqabad koofiyad qiimo leh, sytem-ka 'gradient fit sytem' ayaa bixiya taam ugu fiican dhulka. Sifiican ufiican dhammeystirka gaarka ah ayaa ka dhigaya inuu noqdo xiddig baraf baraf ah.
Heer caalami ah oo la aqoonsan yahay oo la aqoonsan yahay EN1077, Koofiyadaha loogu talagalay barafka buuraha iyo kuwa barafka.
Hore: Koofiyad baraf ah V02
Xiga: Koofiyadda Barafka V06
Koofiyadaha Miisaanka ugu Fiican
Koofiyad baraf koronto leh
Koofiyad Baraf Fudud
Koofiyadda Ciyaaraha Barafka
Koofiyadaha Barafka Sare ee Qiimeysan
Koofiyad Ski iyo Carruurta V01Kid